Tao anatin'ny hetsika famoahana iray, Yahoo! nanjary milay ary Google lasa mpivarotra ambongadiny. Nanao scouring aho ary tsy nahita fanehoan-kevitra avy amin'ny Google momba ny antony nisafidianan'izy ireo hanao an'io hetsika io. Toa ahy izany fa teknika marketing virosy mahafinaritra… mampidira matoanteny vaovao ho an'izao tontolo izao izay misy ny anaranao ao, ka hitaraina ianao? Ny zavatra manaraka fantatrao fa ny indostrian'ny mozika dia hivadika ho olon-dratsy ary hanomboka hitory ny olona amin'ny fizarana mozika mahafinaritra! (Andraso…)
Nitsidika ny foiben'i Google aho nandritra ny dia nataoko tamin'ny taon-dasa. Talanjona tamin'ny oniversite aho, scooter, lakozia, seza fanorana, sns. Nisy eritreritra vitsivitsy tonga tao an-tsaiko… wow, cool, be loatra ny vola eto amin'ity toerana ity, ary afaka mampiasa kaody akanjo ireto olona ireto! Nefa ankehitriny dia hita fa ao amin'ny oniversite izao ireo 'corporat'. Ny iray naneho an'io dia rehefa Trano Cambrian dia nesorina teny ivelan'ny campus rehefa avy nanandrana nanome sakafo an'i Google tamin'ny pizza arivo.
Ho an'ireo orinasa izay tena nahomby nifototra tamin'ny marketing viral, mahagaga ahy fa rehefa tonga ny fotoana hanehoana ny tena 'cool' lazain'izy ireo dia lasa adala fotsiny izy ireo. Ny Best Buy dia nanao an'ity tamin'ny taon-dasa ity raha olona an-jatony no naseho an'i Improv Everywhere toa ny mpiasan'ny Best Buy ary sahirana izy ireo avy eo, niantso ny polisy, ary nomena ny boot izy ireo.
Fehiny, raha hiteny amin'ny olon-kafa ianao fa vaovao, fohy, mafana, baomba, tery sns ... dia aleo tsy atao ao anaty volo iray fotsiny izany. Google dia nandatsaka 10 degre fotsiny tamin'ny coolmometre ahy.
Azafady aza esory ny mailaka mpamaky, Analytics, fanaovana an-tsarintany api, forum fifanakalozan-kevitra na kaonty pejy fandraisana google. Mbola mieritreritra aho fa milay ianao. Tsia as mangatsiatsiaka.